Galmudug iyo MSF oo heshiis iskaashi kuwada saxiixday Magaalada Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya.
HomeWararka SomaliyaGalmudug iyo MSF oo heshiis iskaashi kuwada saxiixday Magaalada Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya.
February 24, 2021 Wararka Somaliya, Galmudug, Wararka Maanta 0
Galmudug iyo MSF ayaa heshiis iskaashi kuwada saxiixday Magaalada Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Mudane Dr. Cabdiweli Cabdullahi jaamac oo ka socday dhanka Galmudug iyo Madax ka socotay MSF oo uu hugaaminayey Gautam Chatterjee oo ah uqeybsanaha MSF ee Soomaaliya ayaa kulan saacado badan qaatey ku yeeshay Xarunta dhexe ee MSF Nairobi.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ayaa Hey’adda MSF uga mahad celiyay, garab istaaga iyo adeega Caafimaad ee ay lagarab-taaganyihiin Dadka reer Galmudug, gaar ahaan Bulshada kunool Mudug.
Heshiiskan cusub ayaa hey’adda MSF u ogolaanaya sii wadida adeegyada Caafimaad ee ay ka wado Isbitaalka Galkacyo, in adeeg Caafimaad oo cusub ka bilaabaan xeryaha baracayaasha ee Galkacyo iyo in Galmudug ay ufurantahay inay keeni karaan adeeg walba oo ay kucaawinayaan Dadka reer Galmudug.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa MSF ku booriyey sare uqaadida adeegyada Caafimaad ee ka socda Galkacyo, kana qayb qaataan dadaalada latacaalidda cudurka COVID-19, sidoo kale Wasiirka ayaa MSF ka dalbadey in ay si buuxda uga qayb qaadato kulamada looga tashanayo Caafimaadka Galmudug.
Ugu danbeyntii Waxaa heshiiska iskaashiga si rasmi ah u kala saxiixday, Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Mudane.Dr. Cabdiwali Cabdullahi Jaamac iyo u qeybsanaha MSF ee Soomaaliya Mr.Gautam Chatterjee.
Wasiirka Caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiwali Cabdullahi Jaamac ayaa inta uu joogo Nairobi kulamo kala duwan layeelan doona deeq bixiye yaasha daneeya caafimaadka iyo hey’addaha kale ee caalamiga ah.
Boliiska Soomaaliya oo sheegay in la fashiliyay Qarax ka dhacay Muqdisho.
Sawiro:- Maamulka Gobolka Mudug oo aasay baraago huriyay dirir sokeeyo oo ku yaala deegaanka Higla Ceele.